Glaciations: ihe ha bụ na ihe kpatara ha ji eme dị ka sayensị | Netwọk Mgbasa Ozi
Portillo nke German | | Meteorology
Mgbanwe ihu igwe na-eme ka anyị nwekwuo obi abụọ banyere nchọpụta sayensị banyere glaciations. Ihe a bụ na n’afọ 2004 anyị nwere ezigbo oge oyi, nwee obere mmiri ozuzo yana ọkụ ọgbụgba nke gbasara n’ụwa niile. Ihe ndị a mere ka arụmụka dịrị n'etiti sayensị banyere usoro ikuku nke ikuku na ihe ọghọm ọ nwere metụtara mgbanwe a. Enwere ndị na-akwado eziokwu ahụ bụ na okpomoku zuru ụwa ọnụ abụghị ihe ụmụ mmadụ na-akpata, mana na ọ dabara na otu n'ime usoro nke glaciation na-eme na mbara ụwa anyị site n'oge ruo n'oge.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara glaciations na mmekọrịta ha na mgbanwe ihu igwe.
1 Oscillations na okpomọkụ
2 Ice afọ na mgbanwe na orbit nke ụwa
3 Oge okirikiri
4 Mara afọ ice na ụwa
Oscillations na okpomọkụ
A maara na n'ime narị afọ gara aga, ihu igwe ụwa enwewo mmụba na ogo okpomọkụ ya. Nke a bụ n'ihi mmụba ogwe nke carbon dioxide na gas ndi ozo na ike ijigide okpomọkụ na ikuku. Nsogbu ya bụ na e nwere ndị na-ekwu na ụwa anyị nwere ọtụtụ glaciations. Ọ bụ eziokwu na n'oge mgbanwe nke ụwa anyị, e nweela oge ịgba ume na oge etiti oge. Otú ọ dị, nsogbu ahụ na-amalite mgbe anyị tinyere dịka mgbanwe na-enyocha ọsọ nke glaciations ndị a na nke okpomoku ụwa tupu ha.
Dị ka a pụrụ ịhụ na usoro oge nke glaciations, nke anyị ga-ahụ ma emechaa, oge gafere n’agbata otu glaciation na nke ọzọ dị ogologo oge maka ụdị anụmanụ na osisi niile na morphology nke usoro okike iji mee mgbanwe na gburugburu ebe obibi. N'okwu a, anyị na-ekwu maka ya mmụba na ogo okpomọkụ zuru ụwa ọnụ na obere oge. Oge di otua na umu anaghi enwe oge iji imeghari ma ha amalite iwelata onu ogugu ha. Nke a bụ mbelata nke ọnụọgụgụ nke ọtụtụ n'ime ha anwụọla.
Iji kpochapụ obi abụọ niile anyị ga-etinye na tebụl ụfọdụ ihe ụfọdụ banyere oge gara aga na nchọpụta sayensị chọpụtara. Nchọpụta ndị a jikọtara usoro niile sitere n'okike nke yiri ka ọ na-emetụta mgbanwe nke ihu igwe. Ekwesiri iburu n'uche na, n'adabere na mmetụta nke ọrụ mmadụ, ndị ọkà mmụta sayensị kwetara dị ka isi ihe kpatara okike nke mgbanwe ihu igwe nnukwu glaciations na ngbanwe nke ụwa na-agbagharị. Agbanwela ngbanwe ụwa na gburugburu anyanwụ ka etinyekwara na nke a. Nke a bụ n'ihi na usoro ihe niile na - agbanwe nkesa nke ike ụwa na - enweta site n'anyanwụ.
Ice afọ na mgbanwe na orbit nke ụwa
Iji mara oge mmiri kpụkọrọ akpụkọ na imirikiti glaciers, ọ dị mkpa iji nyochaa ọnọdụ okpomọkụ kwa afọ site na mbara ala. Ozizi Milankovitch bụ nke na-eme ka o doo anya na enwere mgbanwe na ihu igwe mgbe ọdịdị nke oge Glaciations gasịrị. Ọ bụ ebe a nnukwu ice afọ na obere interglacial oge pụtara. Anyị nọ ugbu a na oge mmekọrịta.
Oge ndị a nke glaciations ime n'ihi Nchikota nke 3 cosmic cycles nke nke Earth orbit na-agbanwe site na okirikiri ka elliptical na Anglịkan. Enwere ihe edere na otu n'ime usoro ikuku nke mbu mere n'etiti 90.000 na 100.000 afọ gara aga. Nke ahụ bụ mgbe ụwa gbanwere orbit ya site na okirikiri gaa na elliptical na Anglịkan. Omume okirikiri ọzọ mere ihe dịka afọ 26.000 wee chọpụta ọnya nke ntụgharị ụwa. N'ikpeazụ, usoro mbara igwe ọzọ mere n'ime afọ 41.000 nke ọchịchọ nke ụwa sitere na ụgbọelu nke orbit oscillates n'etiti 22.5 na 24.5 degrees.
Mgbanwe ndị a niile na mmegharị na ụwa axis bụ isi na-emepụta glaciations. Ekwesiri iburu n'uche na uzo nke okirikiri ụwa na-agba okirikiri ozugbo enwere mgbanwe n’afọ niile. Otú ọ dị, mgbe orbit bụ elliptical, a na-enwekarị ọbịaru nso n'oge ụfọdụ n'afọ. Ka ọ dị ugbu a, anyị maara na agba ụwa gburugburu maka anyanwụ bụ elliptical, ọ bụ ezie na ọ nweghị ihe kachasị dị na ya karịa eccentricity. Mgbe ụwa gafere perihelion, nke a bụ ebe na-agba anyanwụ nso, ọ na - amalite na mbido ọnwa Jenụwarị. Nke a bụ oge udu mmiri n’ebe ugwu ụwa. N’aka nke ọzọ, mgbe ọ dị na aphelion, ọ bụ ọkọchị na mgbago ugwu, ọ bụ ezie na ọ nọ n’ọnọdụ ya kachasị anya.
Kedu mgbe usoro mbara igwe ga-ejikọ usoro a gbanwere, ka oge na-aga, nsogbu ahụ na-adaba na oge oyi karịa nke boreal. Ya mere, amaara na isi ihe na-emetụta mgbanwe mgbanwe ndị a na ọdịdị glaciations kwekọrọ na ihe atụ Milankovitch. Ma ọ bụ na ihe niile yiri ka ọ nwere njikọ na oge nke orbit gbara gburugburu na ebe dị anya site na ụwa adịkarịghị iche. Na ọnọdụ a, oge ọkọchị dị ọkụ dị ka nke ugbu a anaghị eme. N'aka nke ọzọ, na nkebi nke orbit bụ elliptical ma nwee oke ikuku, oge okpomọkụ dị ka ndị dị ugbu a na-eme.
Mgbe orbit dị okirikiri Ọ na-egbochi snow ịgbaze ma jiri nwayọọ nwayọọ na-agbakọta kwa afọ. Nke a na - eduga ụwa n’ọgbọ ọhụụ ọhụrụ. A na-adọrọ nke a dịka nkwubi okwu na ihe na-ekpebi glaciations abụghị oge oyi kachasị njọ, kama ọ bụ ezigbo oge ọkọchị. Site na nke a ka a na-amịpụta ozi ahụ na n'ihi oge nju oyi, ihu igwe agaghị abịa site na kwa afọ mkpịsị polar na-abawanye na ọkpụrụkpụ ruo mgbe ngwụsị nke afọ ice.
Mara afọ ice na ụwa
Ihe ndị a bụ glaciations dị iche iche mara ụwa anyị kemgbe ụwa:
A na-akpọ glaciation mbụ Onye Huronian. O mere ihe dịka ijeri afọ 2.400 gara aga. Ọ dị ihe dị ka narị afọ atọ, ọ bụkwa ya kacha ogologo.
Nke abụọ glaciation a maara dị ka Cryogenic. O nwere ike bụrụ ihe kacha njọ ma mee ihe dịka 850 nde afọ gara aga. Ọ bụ ya kpatara mgbawa Cambrian na-esote.
Nke atọ glaciation mara dị ka Andean-Saharan. O mere ihe dịka 460 nde afọ gara aga.
A na-akpọ glaciation nke anọ karao na ọ mere ihe dịka narị afọ atọ na iri ise gara aga.
Na glaciation dị ugbu a, akpọ Quaternary glasisation, Ọ hụla oge ice dị ihe dịka afọ 40.000.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere glaciations.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ihe egwuregwu
Mbara ala ime